Wasaaradda arrimaha dibadda oo ka tacsiyadeysay geerida Danjire Caabi, kana warbixisay taariikhdiisa – Radio Muqdisho
Wasaaradda arrimaha dibadda oo ka tacsiyadeysay geerida Danjire Caabi, kana warbixisay taariikhdiisa
Muqdisho, May 14 , 2018 – Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya H.E. Amb. Ahmed Issa Awad, Wasiiru dowlaha H.E. Mr. Abdulkadir Ahmed-Kheir Abdi, Wasiir kuxigeenka H.E. Mr. Mukhtar Mahad Daud, Xoghayaha joogtada Wasaaradda, Agaasimayaasha Waaxyaha, Safiirrada, Qunsulada guud , Lataliyeyaasha Wasaaradda iyo dhammaan Saraakiisha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxa ay tacsi u dirayaan ehellada, asxaabta iyo Ummadda Soomaaliyeed geerida ku timid Allah u naxariistee Danjire Abdurrahim Abby Farah oo xalay oo taariikhdu ku beegnayd May 13, 2018 ku geeriyooday Magaalada New York.
Ambassador Abdurrahim Abby Farah ayaa ka bilaabay shaqadiisii ugu horreysay Maamulkii Daakhiliyada ee Soomaaliya, loona yiqiin “The Trust Territory of Somaliland”, waxaana uu ka shaqeynayay intii u dhexeysay 1951-1960, isagoo noqday Agaasimaha Adeegga Warfaafinta Soomaaliya.
Intii u dhexeysay 1961-1965, waxa uu ahaa Danjirihii Soomaaliya ee dalka Ethiopia, isagoo noqday Safiirkii ugu horreeyay ee Soomaali ah oo dalkaasi loo wakiisho.
Sidoo kale, sanadkii 1962 waxa uu wkiil uga ahaa Soomaaliya Guddiga Dhaqaallaha Qaramada Midoobey ee Afrika.
Sidoo kale, Intii u dhexeysay 1964-1965 waxa uu Qaranka Soomaaliyeed u matalay kulamadii Golaha Wasiirada ee Ururkii Midnimada Afrika “Organisation of African Unity (OAU)”.
Intii u dhexeysay 1965-1972, waxa uu ahaa Ergeyga Joogtada ee Soomaaliya ee Xarunta Qaramada Midoobey ee New York.
Sanadkii 1966 ayuu muddo kooban noqday Kusimaha Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya.
Intii u dhexeysay 1969-1972, waxa uu ka mid noqday Shaqaallaha caalamiga ee Jimciyadda Qurumaha ka dhexeysa, isagoo loo magacaabay Madaxa Guddiga Qaramada Midoobey ee gaarka ah ee la dagaalanka midab takoorka, waxaana uu shirguddoomiyay fadhi gaar ah oo Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey oo qabsoomay sanadkii 1972.
Intii u dhexeysay 1973-1978, waxa uu noqday Kaaliyaha Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ee arrimaha siyaasadda.
Sanadkii 1990 ayuu galay da’da howlgabka isaga oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee Qaramada Midoobey.
Marxuum Cabdiraxiim Caabi Faarax oo da’diisu ahayd 99 sano-jir, ayaa ku dhashay Magaalada Barry ee Wales, UK, bishii October 22, 1919.
Haddaba, annagoo ka murugeysan, kana tiiraanyeysan geerida Marxuumka, ayaa waxaan Allah uga baryeynaa inuu u naxariisto, qabrigiisana nuur iyo neecaaw udgoon ku siiyo, hoygiisana ka dhigo Jannada sare ee Alfardows , qoyskiisa, ehelladiisa, asxaabtiisa iyo Ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ka siiyo – Aamiin.
Taliyaha ciidanka Booliska oo xafiiskiisa kulan kula qaatay ku xiggeenka Safiirka Turkiga ee Soomaaliya
Wasiirada Caafimaadka Soomaaliiya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis muhiim ah